Nidina nijery ifotony izany kianja izany ny minisitra sy ny delegasiona notarihany tamin’ny talata 18 febroary 2020 lasa teo notarihin’ny filohan’ny FMA, Andriamahazo Norolalao. Notetezina avokoa ny toerana rehetra toy ny « piste tartan » ny fanaovana « saut à longueur sy saut à hauteur » ny toerana fanipazana « lancer de poids », hatramin'ny tany ambany gradin rehetra tany sy ireo toerana misy ny biraon'ny FMA « Federasion’ny Atletisma Malagasy » ankehitriny ka nahitana nivantana ny fahasimbana lehibe misy amin’ireo toerana ireo.
Hiara-kiasa akaiky ny minisiteran’ny MJS sy ny kaominin'Antananarivo Renivohitra CUA amin'ny fanarenana haingana ny kianja satria dia mampalahelo sy mahamenatra tokoa ny zava-misy hiainana eny an-toerana. Nanome baiko Atoa minisitra ny tsy maintsy hahavitana ny toerana fikotranana (salle de musculation) mialoha ny faran'ny volana martsa 2020 ho avy izao. « Tsy fotoana ipetrahana amin'ny birao intsony izao, hoy izy, fa dia hitsirika ireo toerana rehetra izay tokony hasiam-panovana ny tenany manomboka izao. Tsy afaka hanana taninketsa (relève sportive) isika raha tsy manana fotodrafitrasa manara-penitra ka rariny tokoa raha mifantoka amin'izany ny laharam-pahamehan'ny minisiteran’ny MJS ho an'ity taona 2020 ity.
Marihina fa ny kianjan'Alarobia irery ihany no nahazo fankatoavana iraisam-pirenena afaka mandray fifaninanana nasionaly sy iraisam-pirenena amin'ny taranja atletisma raha eto Madagasikara no resahina.